Shefa njengomnumzane. Isiqephu 1: Ibhulashi | Amadoda aSitayela
Ikilabhu lamaGentlemen | | Kugundiwe, Indlela yokuphila
Kokuthunyelwe okulandelayo ngizobhala ngamathuluzi namasu adingekayo ukushefa njengomnumzane.
Lesi isiqephu 1. Uchungechunge oluphelele lumayelana:
3.- Ukushefa ukhilimu
4.- Ngemuva kwalokho
5.- Indlela yokushefa
Izakhi eziyisisekelo ezi-3 kushevu omuhle ibhulashi, i-blade nokhilimu wokushefa. Kulawa ma-3, ibhulashi ngokungangabazeki liyinto ebaluleke kakhulu. Uma ufuna sebenzisa Tshala imali ezintweni ezinhle zokushefa, ngincoma ukuthi uqale ngebhulashi.
Ibhulashi elihle lenziwa ngezinwele zebheji, kepha ungakhathazeki, akudingeki ukuthi libize. Ngokwemvelo ukuphakama kwekhwalithi yebhulashi, kuzoba kubiza kakhulu, kepha ngama-euro angama-20 ungathola ibhulashi elihloniphekile.
Ulisebenzisa kanjani ibhulashi?
Faka ibhulashi esitsheni (ngokwesinki) ngamanzi ashisayo. Ngenkathi ibhulashi lifudumeza, uthele ukhilimu othile wokushefa emugini. Khipha ibhulashi, kodwa ngaphandle kokuwasusa ngokuphelele amanzi. Faka ukhilimu enkomishini ngebhulashi. Ngokukhululekile, vele ukokele ibhulashi kuze kube yilapho selikhulelwe kahle ngokhilimu okushefa. Usebenzisa ibhulashi elinensipho nobuso obugezwe ngamanzi ashisayo, gcoba ibhulashi ebusweni bakho, ngokukhululekile nasemibuthanweni, lize limbozwe ngokuphelele ungqimba oluhle lukakhilimu.
Unamuphi umphumela esikhunjeni?
Ukubhucungwa ngebhulashi kusiza ukumuncwa kokhilimu esikhunjeni. Ngaphezu kwalokho, iphakamisa izinwele zentshebe, ukuze ukushefa kusondele. Okokugcina, ibhulashi lisiza ukukhipha isikhumba ngaphandle, lisuse izinsalela zesikhumba ezifile nanoma yini eza phakathi kwekhaba nesikhumba sakho.
Njengoba ibhulashi lingumkhiqizo wemvelo (lenziwe ngezinwele ze-badger) lidinga ukunakekelwa okuncane ukuze lihlale lilihle iminyaka eminingi. Uma usuqedile ukusebenzisa ibhulashi, lisike kahle. Uma ingasetshenziswa, yigcine ilenga ibheke phansi ukuze ususe noma imuphi umkhondo womswakama.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Shefa njengomnumzane. Isiqephu 1: Ibhulashi
Pre-shahe okhilimu namafutha